Mon, Jul 23, 2018 | 01:46:01 NST
08:25 AM (6months ago )
मिलन तिमिल्सिना -
काठमाडौंबाट जहाज चढ्नेबेला लागेको थियो, दिल्ली विमानस्थलमा ओर्लेपछि सरासर अर्को जहाज चढ्ने ठाउँतिर पुग्न पाइन्छ । तर सोचेजस्तो होइन रैछ ।
यताबाट चढेको जहाजले केही ढिलो गरेर दिल्ली पुर्‍यायो । त्यहाँ पुगेको ४५ मिनेटमा अर्को जहाजमा पुगिसक्नुपर्ने । विमानस्थलबाट बाहिरिने बेला अध्यागमनमा जाँच गर्नुपर्छ भन्ने त थाहा थियो । तर विमानस्थलबाट ओर्लेर भित्रैबाट अर्को जहाज चढ्दा अध्यागमन जाँच गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थिएन ।
सोध्दैखोज्दै जाँदा अध्यागमन जाँच गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो । यति थाहा पाउँदा १५ मिनेट बितिसकेको थियो । बल्लतल्ल अध्यागमन जाँच गर्ने ठाउँमा पुगियो । त्यहाँ यति धेरै लाइन थियो कि, लाइनमा उभिँदा एकघण्टामा पनि पालो आउँदैनथियो । अब के गर्ने भनेर चिटचिट पसिना आउन थाल्यो । नजिकै रहेका विमानस्थलका कर्मचारीलाई हाम्रो जहाज छुट्ने भयो, छिटो जाँच गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर अनुरोध गर्‍यौं । तर उनले वास्ता गरेनन् ।
लाइनमा नबसी सुख पाइएन । लाइनमा उभिँदै घडी हेर्दै गर्दा काठमाडौंबाट जहाजमा सँगै आएका एकजना भलाद्मी आइपुगे । झट्ट हेर्दा उनी भारतीय जस्ता देखिन्थे । तर जहाज चढ्ने बेला मैले उनको हातमा नेपाली नागरिकता देखेको थिएँ । नागरिकतामा सिरहा भनेर लेखिएको थियो । जहाजमै मेलै उनलाई तपाईंको घर सिरहा हो भनेर सोध्दा उनले मुसुक्क हाँसेर मुन्टो हल्लाएका थिए ।
जहाजमा भएको त्यही सोधीखोजीले उनीसँग आफूहरुको समस्या सुनाउन बल पुग्यो । उनले हाम्रो टिकट हेरे । लौ लाइनमा बस्दा त तपाईंहरुको जहाज छुट्छ, अध्यागमनका कर्मचारीलाई भनेर छिटो गर्नुहोस् भने । तर हामीले भनेको सुन्दैनन्, त्यसमाथि हामीलाई हिन्दी पनि राम्रोसँग आउँदैन, तपाईंले एकपटक भनिदिनुहोस् न भनेर अनुरोध गर्‍यौं । उनी पनि कतै जान हतारमा थिए । तर हतार भए पनि हामीलाई सहयोग गर्न तयार भए । उनी हामीलाई लिएर अध्यागमनको कर्मचारी भएको ठाउँमा पुगे । हाम्रो समस्याबारे हिन्दीमा बातचित गरे ।
अघिसम्म हाम्रो समस्यालाई वास्ता नगरेका ती कर्मचारी उनको कुराबाट प्रभावित भए । शायद ती कर्मचारीलाई लागेको थियो, उनी भारतीय हुन् । जसले समस्यामा परेको कुनै विदेशीलाई सहयोगको याचना गर्दैछन् ।
जे होस् भारतीयजस्ता देखिने सिरहाका नेपाली साथीको सहयोगमा हामीले लाइनमै नबसी अध्यागमनको काम सक्यौं । उनलाई धन्यवाद दिएर हतारहतार जहाज भएको ठाउँतिर हिँड्यौं । जहाजको सिटमा बसेपछि लामो सास फेर्‍यौं । हैदरावाद पुगेर काठमाडौं फर्किंदासम्म दिल्लीमा गुन लगाउने ती मधेसी मित्रको अनुहार झलझली याद आइरह्यो । हतारमा भएकाले उनको फोन नम्बर पनि टिपिएन । उनले लगाएको त्यो गुन कसरी तिर्ने होला भन्ने लागिरह्यो ।
हैदरावादबाट फर्किएको एक हप्तापछि दिल्लीमा मधेसी मित्रले आफूलाई गरेको जस्तै सहयोग एकजना मधेसी भाइलाई गर्ने अवसर जुर्‍यो । अफिसको काम सकेर घर फर्किंदै थिएँ । धोबिघाटमा उभिएर कीर्तिपुर जाने बस पर्खिंदै गर्दा एकजना भाइ नजिकै आएर सोधे –दाइ यहाँबाट बयलबास जाने बस कहाँ पाइन्छ ? काठमाडौंमा नौलो ठाउँको नाम सुनेर म एकछिनमा अलमलमा परें ।
बयलबास भनेको कहाँ हो र भाइ ? भनेर सोध्दा उनले एकछिन अकमकिएर सर्लाही भने । सोधीखोजी गर्दा थाहा भो, उनी काठमाडौं घुम्न भनेर अघिल्लो दिन नाइट बस चढेर बिहान काठमाडौं आइपुगेका रहेछन् । बिहानै कोटेश्वरमा ओर्लेछन् । एकछिन वरपर घुमेछन् । एउटा सस्तो होटल खोजेर भात खाएछन् । भात खाएपछि उनलाई काठमाडौं घुम्ने रहर पूरा भएछ । त्यसपछि घर जान भनेर निस्केछन् । कलंकीबाट घर जाने बस पाइन्छ भन्ने सुनेर कोटेश्वरबाट लोकल बस चढेछन् । धोबिघाट पुगेपछि बसवालाले कलंकी यही भनेर ओरालेछन् ।
सबै कुरा थाहा पाएपछि उनलाई एक्लै कलंकी पठाउन मन मानेन । ल हिँड म तिमीलाई गाडी चढाइदिन्छु भनेर बल्खुसम्म लिएर गएँ । बाटोमा घर परिवारबारे सोधीखोजी गरें । घरमा बाआमा र भाइ रहेछन् । काठमाडौं घुम्न जान्छु भन्दा सुरुमा आमाले हुन्न भन्नुभएछ । तर उनले कर गरेपछि पठाउनुभएछ । घरमा सम्पर्क गर्ने फोन पनि रहेनछ ।
बल्खु पुगेपछि बयलबास जाने सुमोमा उनलाई चढाइदिएँ । जानेबेला हात हल्लाउँदै उनले भने–दाइ काठमाडौं हेर्ने रहर पूरा भयो, अब एक्लै कहिल्यै आउँदिन ।